Iindaba-Ukulungiswa kwezixhobo zoNyango
Susa ukhula, isanti kunye namalungu angengawo amayeza. Ngokweemfuno zeentlobo ezahlukeneyo, ezinye kufuneka zikrwele ulusu, ezinje ngeengcambu ezimhlophe zepeony; ezinye kufuneka zisike amaxolo arhabaxa, njengekhokho; ezinye kufuneka zisuse intloko yengcongolo, ingcambu enemicu kunye namasebe ashiyekileyo kunye namagqabi, njl. Abanye kufuneka bayisusile intliziyo yeenkuni, ezinje ngeDanpi.
Ukutsha, ukubilisa, kunye nokufaka iblaching kwezinye izinto zonyango ezinesitatshi esininzi okanye iikhabhohayidrethi kunye ne-mucilage akukho lula ukomisa. Ezinye zinee-enzymes ezibola zize ziguqule ezinye zezinto zazo. Ukuba zivutha, ii-enzymes ziya kuphulukana namandla azo. Gcina iipropati zonyango ngaphandle kokuwohloka.
Eminye imathiriyeli yonyango eyi-rhizome, efana ne-Danshen, Angelica dahurica, Peucedanum, Achyranthes, Shegan, Polygonum cuspidatum, Phytolacca, Pueraria lobata, Tufuling, Scrophulariaceae, njl.njl. ; Iziqhamo zezixhobo zonyango ekungelula ukuzomisa, ezinje nge-xuan papaya, ikalika, ibergamot, njl., Kufuneka zisikwe kuqala ngaphambi kokumiswa; Amagqabi amayeza afana ne-eucommia, i-magnolia, isinamon, njl.njl. nawo kufuneka asikwe abe ziingceba okanye izilayi ngelixa zisentsha. Qengqeleka ube yityhubhu kwaye emva koko wome.
Injongo yokomisa kukulungiselela ukugcinwa kunye nokusetyenziswa kwexesha elide, kwaye uzame ukugcina inkangeleko, ivumba kunye nomxholo wesithako esisebenzayo samachiza ekrwada angatshintshanga ngexesha lokomisa.
Sebenzisa ukukhanya kwelanga kunye nomoya wangaphandle ukuze womise imifuno. Indlela yokumisa ilanga ihlala ilungile kwizinto zamayeza ezingadingi mbala othile kwaye zingenayo ioyile eguqukayo, enje nge coix, burdock, astragalus, paeonol, eucommia, njl. izixhobo zineendlela ezahlukeneyo. Xa usoma, izinto ezivunyiweyo zamayeza zihlala zisasazwa emethini. Nika ingqalelo ukukhusela imvula, umbethe, kunye nokuthintela umoya ukuba ungasasazeki, kwaye uhlala uwuguqula ukukhuthaza ukomisa kwangoko.
Bhaka izixhobo zamayeza kubushushu obuphantsi ngokusebenzisa ukomisa okanye umngxunya womlilo ukomisa izixhobo zokunyanga. Iqondo lobushushu kufuneka lilawulwe ngexesha lokomiswa. Ukuba amaqondo obushushu asezantsi, akukho lula ukoma. Ukuba iqondo lobushushu liphezulu kakhulu, umgangatho uya kuchaphazeleka. Ukuba iqondo lobushushu le-rhubarb egcadiweyo alikho ngaphezulu kwe-60 ℃, iqamza lomzimba liya kuba mnyama kwaye umgangatho uya kuncitshiswa. Kuphezulu kakhulu, njengobushushu bokomisa iintyatyambo zesilivere kulawulwa kwi-38 ℃ -42 ℃.